Xiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsan Gobolka Sool - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Xiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsan Gobolka Sool
Xiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsan Gobolka Sool
Wararka laga helayo deegaano hoostaga Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa waxaa ay sheegayaan inay halkaasi ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeeysa Ciidao ka wada tirsan kuwa Soomaaliland.
Xiisadaan ayaa waxaa sigaar ah looga dareemay deegaanka Gooja Cadde oo dhaca duleedka magaalada Laascaanood,kadib markii Xabsiga la dhigey taliye ku xigeenka qaybta 7-aad ee ciidamada Somaliland Ibraahim Ashkir.
Ciidamo ka caroodey xariga taliyaha iyo Saraakiisha Ciidamada Soomaaliland ee Gobolka Sool ayaa la sheegay in haatan ay u dhaxeyso xiisad dagaal,waxaana dadka deegaanka deegaanka Gooja Cadde ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in Ciidamada dhexdooda ay dagaalamaan.
Taliyaha qaybta 7-aad ee Ciidamada Sooaaliland Korneyl Mahad Cambaashe ayaa la shaaciyey in uu amray xariga taliye ku xigeenka qaybta 7-aad ee ciidamada Somaliland Ibraahim Ashkir.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Deegaanada Yagoori, Guumays, Adhi Cadeeye iyo magaalada Laascaanood ay xalay la wareegeen ciidamo hubaysan oo ka careysan xarigaas,kuwaas oo sheegay inay dagaaami doonaan hadii aan la deyn taliyahooda.
Previous articleMaxey ka wada hadleen Madaxweyne Deni iyo Safiirka Ingiriiska?
Next articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 24-01-2020